ITile Ceilings Tiles
Ifowuni ye-2018 ye-aluminium yokhuni eyenziwe yenziwe ngeebhokisi
Siyinxalenye ekhethekileyo kwimarike, ngokuzibophezela ekunikeleni i-2018 i-aluminum yokhuni yokhuni ekhutshwe ngebhokisi. Isitofiso sethu se-2018 esenziwe ngamatye esenziwe ngeenkuni esityhiweyo esilungisiweyo sebhokisi senziwe kuphela ngokusetyenziswa kwezixhobo eziphezulu kunye nezixhobo zanamhlanje ngokuvumelanisa nemilinganiselo emarike. I-2018 i-aluminium yokhuni yokhuni eyenziwe ngamatye enqanyuliweyo ...
I-2018 I-aluminium emisiweyo ehlotshisiwe ihleli kwiileyili zelityela
Ukuxhaswa ngutitshala ocebile wezakhiwo, siye sakwazi ukuvelisa, ukubonelela kunye nokurhweba i-aluminium yase-2018 ehlotshisiwe ehleli kwiileyile. Eyilwe ngobuchule, izilwanyana ziphuhliswa liqela lethu labaqeqeshi, elithatha ulwazi olubanzi lwalesi sizinda. Ngaphambi kokuthunyelwa kokugqibela, wethu unikezela nge-aluminium enqunyanyisiweyo ye-2018 ebekwe kwiileyili zelitye ihlolwe ngokuthe tye ngeqela le ...
i-aluminium yangaphakathi iselula eselula
Sinika i-aluminium yangaphakathi eselula eselula eselula njenge-aluminium etelenki ephakamileyo njengoko kuqhutywe ngokwemigangatho yoshishino. Eyona ndlela ifanelekileyo kwizicelo zokusebenza ezahlukeneyo, i-aluminium yangaphakathi yeselula evuliwe ilula ukuyifaka. Abaxhasi banako ukufumana uluhlu lwethu oluneenkalo ezahlukeneyo kunye nobukhulu obuhlukeneyo kunye nemibala esekelwe kwiinkcukacha zabo kunye neemfuno ezithile. Njengokwesikrini ...
ITile Ceilings Tiles/Vula i-Cell Metal Ceilings
I-2018 i-aluminium ephathekayo yentsimbi yelitye
Ukuze siqhubeke sisantya singazange siphele iimfuno zabathengi, inkampani yethu inikeza uluhlu oluphezulu lwe-2018 Fashionable aluminium yecwecwe yensimbi esetyenzisiweyo kubathengi bethu abahloniphekileyo. Le fayili ye-aluminium ye-2018 ifowuni isetyenziswe kwiibhedlele, iivenkile, isakhiwo seofisi, izitishi, izitolo kunye neehotele. Sinikeza le mveliso kubathengi bethu abahloniphekileyo kwixabiso elininzi. Uhlobo: Ilitye ...
i-aluminium eselisiwe isilwanyana esinikezelwayo iqulethe iqoqo eligqibeleleyo elenziwe kwinqanaba eliphezulu lesimbi kunye neendlela ezinomdla kunye ezikhangayo ezenza ezi zinto zikhethiweyo kwaye zifunwa kwiimarike. Ngaphezu koko, i-aluminium enikezelwayo yokuqokelela iifilitye ezinokumiswa zingasenakufumaneka nakwizinto ezikhethiweyo zokuzikhethela njengemimandla yoshishino ekhulayo. Sinokwenza isiko ...
Ukukhupha kwi-Plail Metal/ITile Ceilings Tiles
Isaphulelo esikhulu se-Discount sinyakatho
Ngenxa yezigulane zethu ezidumileyo sikwazi ukunikela nge-Big Discount isitifiketi senyakatho seofisi, ii-stalls etc. njl. Lezi ziqeshana eziphambili zeRaphundu ezisezantsi zisekhompyutheni zokufaka kunye nokugcina kwaye zihlanganiswe neengubo zokukhusela ezihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala. Le ntengo enkulu yesiRiphabhuliki ...
Isiqeshana kwi-Metal Ceilings/ITile Ceilings Tiles
I-Hook kwi-aluminium ephothiweyo i-129
Ukuze uqhubeke nohambo olungapheliyo iimfuno zabathengi, inkampani yethu inikeza uluhlu oluphezulu lwe-Hook kwi-aluminium engqonge i-129 kubathengi bethu abazukileyo. Le ngqayi e-aluminium ekhutshelwe i-129 ifunwa kwizibhedlele, iivenkile, isakhiwo seofisi, izitishi, izitolo kunye neehotele. Sinikeza le mveliso kubathengi bethu abahloniphekileyo kwixabiso elininzi. Uhlobo: Ilitye ...
I-2017 i-aluminium eqhotyoshelweyo kwisiqulatho kwibala kunye nombala womthi womthi
Kubalwa njengenye yeemibutho ezivelele, sithintela ekunikezeni uluhlu olubanzi lwe-2017 Aluminium eqhotyoshelweyo kwisiqulatho kwi-plailing Color ColorQ. Le ngqungquthela ye-2017 i-aluminium engqambileyo kwi-plailing kunye nombala womthi womthi uyaboniswa ngenxa yokwakha kwawo okunamandla, ubungakanani obuchanekileyo kunye nokusebenza okuphezulu. Ngenxa yomelelo layo elide kunye nobomi obusebenzayo, ii 2017 ...
I-2017 I-grid yokwenza imodeli yokwakha iCanada
Sijolise ekujonganeni neemfuno zabathengi bethu ngokubonelela ngesisombululo esithembekileyo nesisisigxina kwi-2017 yohlobo lwe-grid yokubumba iCanada. Eyona nto eyenziwe ukuba iyanelise iimfuno zabathengi bethu, izixazululo zethu ze-2017 ze-Fashionable grid design design yeCanada zixabiswa kakhulu kwiimarike. Sinika le nkonzo ngexabiso elithengileyo kwimarike ....
I-2017 i-aluminium yokukhenkcela isikwere sebala
Sinika abathengi bethu abahloniphekileyo uluhlu olubanzi lwe-2017 i-aluminium yokukhenkcela yelityela elenziwe ngetekisi eyenziwe ngokusetyenziswa kweGI kunye ne-aluminium. Ukuze kuqinisekiswe umgangatho walo, abaqulunqi bethu beemviwo babalawuli bavavanya le nkqubo kwiiparitha ezahlukeneyo. Ngaphandle kwalokhu, sinika le nkqubo kwiinkcukacha ezahlukeneyo kunye noyilo ukwenzela ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo ze ...
I-2017 i-aluminium yensimbi yensimbi ye-plafle
Intlangano yethu ibandakanyeka ekuveliseni nasekunikezeni uluhlu oluphezulu lwe-2017 ye-aluminium yensimbi yelitye yokufumba. Le nkqubo ye-2017 yensimbi ye-alfumini ye-alfabhethi yinkqubo yelitferensi yecilisi yinkqubo ephezulu kwaye ihlala ikwazi ukunika inkxaso eninzi kwi-wiring yombane kunye nokulungelelanisa ukulungiswa kwayo kulula kunye neyamehlo eyiyoyiyo. I-2017 yethu ye-aluminium yensimbi ye-metal bffle system isile ...
I-2017 yaseShina isiqinisekiso sokurhweba kwe-aluminium ethengeni
Sikhokela ngumboneleli we-2017 yaseShayina isiqinisekiso sokuthengiswa kwe-aluminium etyilum efakwe kwi-aluminium yokwenene yensimbi, eyenziwe lula. Le 2017 yaseShayina isiqinisekiso sokuthengiswa kwe-aluminium e-aluminium e-baffle ifumaneka ngamanani amaninzi kunye neepateni njengoko kukhethwe ngabathengi bethu. I-2017 yaseShayina isiqinisekiso sokurhweba kwe-aluminium etyileni ye-baffle ifakwe ngokubanzi kwizakhiwo zorhwebo, njengaye ...
Ukuthengiswa okutshitshiswa kwe-aluminium ophahleni lwephampoli
Siyinxalenye ekhethekileyo kwimarike, ngokuzibophezela ekunikeni ukulungiswa komgangatho ophezulu weentengiso ze-Aluminium ophahleni lwepalam. Ixabiso lethu elithengisiweyo elithengiswayo elenziwe nge-aluminium ophahla lwepaneli yipaneli yokufakelwa i-panel panel yenzelwe kuphela ukusebenzisa izixhobo eziphezulu kunye nezixhobo zanamhlanje ngokuvumelanisa nemigangatho yemarike. Ukuthengiswa kwe-aluminium yokutshisa i-aluminium ephahleni kwipaneli yokutsala ihlwaywa yi ...
I-2017 Quality Quality Aluminium Acoustic False Ceiling Board
I-2017 Quality Assured Aluminium Acoustic False Plailing Board inikezela iqoqo eligqibeleleyo elenziwe kwinqanaba eliphezulu lesimbi kunye neendlela ezinomdla ezithandekayo kwaye zithandwa kakhulu kwiimarike. Ukongeza, i-2017 Quality Assured Aluminium Acoustic False Ceiling Board yeqokelelo ingabuye ifumaneke ngathi ngobuchule obubanzi ...
I-2017 ilitye yokuthengisa ishushu eshushu esilenga ukuhlobisa i-Christmas
Intlangano yethu ibandakanyeka ekuveliseni nasekunikezeni uluhlu oluphezulu lwesakhiwo se-2017 esentengiso eshushu esicutha i-Christmas decorations. Ezi zixhobo ze-2017 zentengiso ezishisayo ezityilisiweyo zamehlo ezindibaniso ze-Christmas zizakhiwo ezinempumelelo kwaye zihlala zizinzileyo ezibonelela ngenkxaso ephezulu kwi-wiring yombane kunye nokulungelelanisa ukulungiswa kwayo kulula kunye neyamehlo eyiyoyiyo. I-2017 yethu yelitye yokuthengisa eshushu eshushu isilenga ...
I-4mm I-Mirror Qedela i-Acp ye-Design Shape Mirror Panel Aluminium
Inkampani yethu ihlonishwa kakhulu ekunikezeni i-4mm Mirror Qeda i-Acp ye-Design Shapes Mirror Panel Panel kubaxumi. Sinikeza le nkonzo kumacandelo ahlukeneyo, izindlu, nezakhiwo zokwakha kunye nokwakha ubuqhetseba obungamanga ngokusebenzisa i-gypsum ephezulu. Ukongezelela, le Mirror 4mm iqedile i-Acp yeSakhiwo soMfanekiso we-Mirror Umsebenzi wePhaneli ye-Aluminium isebenza ngaphantsi kwe-stern ...
I-2018 i-Aluminium acoustic yamisa iiplanga
Ngenkxaso yabasebenzi bethu bokuthenga sinika abaxhasi bethu abaxhamli be-2018 Aluminium acoustic ephasanyisiweyo yamapaneli afanelekileyo afanelekileyo kwezo zorhwebo nezakhiwo zokuhlala kwaye zibe neendlela ezichanekileyo zokufakela lula. Ezi zikhundla ze-aluminium ze-aluminium ze-aluminium ezixhaswayo zithengwa zivela kubathengisi abathembekileyo beli marike phantsi kokulindela abo bathengisayo. Ngaphandle kwe...
Isitya esitsha se-Metal Wood esityebile esilula
Izilwanyana ezixhaswe zixhonywe kwi-plafond ephezulu ngokusebenzisa i-metal grids. Isinyithi, okanye i-stainless-steel steel, iipaneli zisebenza kakuhle kunye nezilwanyana ezinqunyanyisiweyo. Iipaneli zamatye ngokuqhelekileyo zifika ezimhlophe. Isitya esitsha se-Metal Wood esineziqhamo ezivulekileyo zeseli zibonelela ngeentlobo ezininzi zeemveliso ezinobuninzi ngokubanzi kwindlela yokuyila kunye nokukhetha okufakwe kwiTiles, (Lay in and Clip in), okanye ...
Ukufakwa kweseli yesinyithi, i-Aluminium evuliwe evuliwe kwisikhululo sesitimela
Sinobuchule ekuboneleleni nge-premium grade metal cell, iAluminium evulekile isitishi. Imveliso yethu inikezelwe emva kophando olukhulu nophuhliso ukuzalisa iimfuno zabaxhasi bethu abaxabisekileyo. Ukunikezela kwethu kweseli yesinyithi, i-aluminium evulekile isitishi se-Sitroji yenziwe ngokusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni phantsi kobuchule obuqilileyo beengcali. I-Metal ...
I-Pvdf yokubhinqa i-aluminium yelitye yelitye yokudonga kwipaneli
Ukukhuthazwa kunye neqela labaqeqeshi abanolwazi, siye sakwazi ukuvelisa nokubonelela ngePvdf yengubo ye-aluminium yelitye yokwenza udonga lwepaneli. I-Pvdf yokutshiza i-aluminium yelitye yelityeli yodonga lwepaneli ifunwa ngokubanzi kwii-Airports, Izibhedlele, iiNkonzo, iLobby, iSitishi seMetro, iiNdawo zeeNdawo zoLuntu njl. Uhlobo: Iifayili zokufaka indawo Indawo yokuqala: Jiangsu, e-China (eMzantsi) Igama lomgama: .. .
FONNOV, a subsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING is a shareholder of 3 main businesses on manufacturing ukufakwa kwensimbi kunye nemibhado, i-aluminium extrusions, njengo zokugqoka. I-FONNOV, njenge-subsidiary, isebenze ekuthengiseni nasekuthengiseni kwishishini langaphandle.
I-Baffle Metal Ceilings
Isiqeshana kwi-Metal Ceilings
Ukukhupha kwi-Plail Metal
Lay Lay In Metal Ceilings
Izixhobo zokuThuthukiswa kweziTyhulwa zoMbane
Vula i-Cell Metal Ceilings
I-2017 yokuhlobisa i-W300 ibhafu yokutsala i-spandrel
Izilwanyana ezinqambileyo zetsimbi
Izilwanyana zetsimbi ezongeziweyo ezingenangqiqo
Uqinisekiso lwezorhwebo 600 * Ilitye le-600 yelitye yokwakha iofisi
Iphaneli ye-aluminium e-perforated efanelekileyo eyenziwe ngentsimbi yangaphandle eChina
Iminyaka eyi-10 Ii-aluminium ezingenamlilo ezikulo ipaneli yelinye 2 'x 2' kunye neSGS
© 2018 MRICC | eKhaya XML